Sh Shariif oo ugu baaqay dowladda in ay wax ka qabato musiibo dhawaan ka dhacday Muqdisho | Star FM
Home Wararka Soomaaliya Sh Shariif oo ugu baaqay dowladda in ay wax ka qabato musiibo...
Sh Shariif oo ugu baaqay dowladda in ay wax ka qabato musiibo dhawaan ka dhacday Muqdisho
Madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya ahna Guddoomiyaha Midowga Musharaxiinta Sheekh Shariif Sh Axmad ayaa xalay la kulmay qoysas Carruur ay shalay uga dhinteen daadad xoogan oo ka dhashay roobkii ka da’ay Magaalada Muqdisho.
Sheekh Shariif ayaa qoysaska uga tacsiyeeyay Carruurtii ka geeriyootay, isla markaana waxaa uu Alle ugu baryay inuu beddel kheyr qaba iyo simmir ku irsaaqo qoysaska, isagoona garab istaagna u muujiyay.
Xasan Cabdullaahi Gacal oo 5 Carrruur ah ku waayay musiibada, Aadan Jabriil Sheekh oo 3 carruur ah ka geeriyootay iyo waalid 3 carruur ah oo hooyadood Cisbitaal la dhigay ayaa u mahad celiyey Madaxweynihii hore ee dalkaasi iyo Xisbiga Himilo Qaran.
Ugu dambeyn Madaxweynihii hore ee Soomaaliya aayaa waxaa ugu baaqay dowladda Federaalka inay wax ka qabato sababaha keenay in daadadku ku rogmadaan xaafadaha shacabku deggan yahay.
Previous articleWasaaradda tacliinta oo soo saartay lacagaha dugsiyada sare ee dib ufurka iskuullada
Next articleCiidamada Israa’iil oo boqolaal qof oo Falastiiniyiin ah ku dhaawacay masjidka Al-Aqsa